Manatsara ny fanjifana bateria ao amin'ny iOS 7 | Vaovao IPhone
Ny rafitra miasa Apple vaovao dia efa tonga, ary miaraka aminy ny lisitry ny lahasa vaovao ho an'ny fitaovantsika, ny sasany amin'izy ireo dia tena ilaina tokoa, nefa mitombo ny fihinanana bateria, noho izany dia tsy maintsy hainao ny manombana raha mendrika izany fandaniana ambonimbony izany raha ny aminay, ka raha tsy izany dia esory ny asany. Azavainay eto ambany ny antsipiriany.
1 Serivisy toerana
2 Fampidinana araky
3 Fanavaozana ny zava-misy
Mihabetsaka ny rindranasa mangataka antsika hiditra amin'ny serivisy toerana, izay tsy afaka mamoaka olana manokana fotsiny, mizara tsy tapaka ny toerana misy anay, fa misy koa ny fampiasana loharanon-karena maneho vidin'ny bateria fanampiny. Mba hifehezana ireo raharaha roa ireo dia tsara kokoa ny miditra amin'ny Fikirakira ny Rafitra ary mijery hoe iza amin'ireo rindranasa no mampiasa azy ary alefaso fotsiny ireo tena tiantsika hatao, na esory izany raha izany no tadiavintsika. Afaka miditra amin'ny Fikirana> Tsiambaratelo> Toerana.
Tsy ny rindranasa ihany no mampiasa ireo serivisy ireo, fa ny rafitra ihany koa. Fantatro ao anatin'io menio io fa miditra «Serivisy serivisy«, Ho hitantsika fa misy fiasa maro navadika, ny ankamaroany izay dia tsy tena ilain'ny ankamaroan'ny mpampiasa. Izaho manokana dia mamporisika ny hanafoanana azy rehetra raha tsy misy mahasoa antsika ny iray amin'izy ireo.
Ao anatin'ny «Fikirana> iTunes Store sy App Store» no hahitantsika ireo safidy mandeha ho azy fampidinana. Izay fividianana rehetra ataonay amin'ny fitaovana amin'ny kaontinay App Store hisintona ho azy eo amin'ny fitaovana rehetra miaraka amin'io kaonty io ihany raha ampidirina ireo safidy ireo. Mahafinaritra izany, saingy mazava ho azy fa misy fantson-batterie manan-danja. Ho fanampin'izany, raha iPhone na iPad misy fifandraisana data dia ho hitantsika ny safidy hampiasana ireo fampidinana mandeha ho azy ireo amin'ny alàlan'io fifandraisana data io, izay tsy soso-kevitra, tsy ho an'ny fiainana bateria ihany, fa ho an'ny tahan'ny data ihany koa.
Fanavaozana ny zava-misy
Zava-baovao iray manan-danja amin'ny iOS 7 ny multitasking vaovao. Na dia ny zava-bita indrindra aza dia ny hatsarana vaovao, misy ihany koa ireo safidy vaovao azon'ny mpandrindra ampiasaina amin'ny fampiharana azy ireo. Ny iray amin'izy ireo dia ny «Fanavaozana ny mombamomba», izany hoe, izany fampiharana dia afaka manavao ny angon-drakitra na dia any aoriana aza. A) Eny, Instapaper Azonao atao ny manavao lahatsoratra voatahiry ao ambadika mba hahafahantsika manokatra azy io rehefa manokatra azy isika dia tsy mila miandry ny entana ao anatiny. Safidy tsara ho an'ny maro, fa zavatra tsy misy ilana azy ho an'ny hafa ary toa heverina ho fanjifana bateria ambony. Azontsika atao ny manamboatra an'io fiasa io amin'ny "setting> General> Fanavaozana ny mombamomba azy", ary ireo rindranasa mahaliana antsika ihany no avelantsika hitranga raha misy mahaliana antsika.
Mazava ho azy fa misy safidy maro hafa azontsika ampifanarahana hanatsarana ny fanjifana bateria: famirapiratana, Bluetooth, fifandraisana 3G, fifandraisana data, hidy mandeha ho azy ... Ny fahitana ny fifandanjana eo amin'ny zavatra atolotry ny fitaovana antsika sy ny tena ampiasaintsika Ilaina tokoa ny fanaovana izay tsara indrindra avy eo, ary mba tsy "hidona" alohan'ny tokony hanaovana azy.
Fanazavana fanampiny - Ny Instapaper sy Pocket dia havaozina amin'ny iOS 7
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 7 » Manatsara ny fanjifana bateria ao amin'ny iOS 7
Mifanohitra amin'izay no izy, maharitra kokoa ny bateriko ... Ary manana ny toerako foana aho amin'ny fotoana ampandehanana ao amin'ny foibe fampandrenesana. Hafahafa izany.
Fa maninona ianao no mampiasa ny sary (tsara be), avy amin'ny iOS 6 stack taloha? Menatra ianao mampiasa ny iOS 7 vaovao, sa tsy izany? Aza matahotra fa omeko ahy koa io. Inona koa, izao dia azonao atao ny manoritra azy io ary tsy mila mitady izany amin'ny Internet ianao. Amin'ny Paint.Net azonao atao ao anatin'ny 2 minitra io.
Tena mahazo "picky" ianao indraindray. Nampiasako io sary io satria toa azo sary, tiako ilay izy ary toa tokony haloako izany. Tsy misy zavatra hafa ... Tianao ny miala amin'ny toerana tsy misy.
Fantatrao fa amin'ny fanajana anao dia mampihomehy aho. Raha ny marina, tsy gaga aho fa tianao izany ary mazava ho azy mihoatra ny iOS 7 satria fitaka izany.
Na dia ny zavatra lojika aza raha hampiasa batery hiresahana ny olan'ny iOS 7 ianao, ny zavatra lojika dia ny fametrahana ny batterin'ny iOS 7 fa tsy ny an'ny iOS 6. Hitan? Ity no tiako holazaina amin'ny fahavoazana nataoko tao amin'ny iOS 7.
iOS 7 amin'ny ambaratonga famolavolana dia fitaka ary fantatry ny rehetra. Araka ny nolazaiko hatrizay, tsara ny fanovana, saingy tsy fanovana izany, rava. Talohan'ny avonavona ny firavahana ireo bilaogy misy sary an'ny tena iOS. Ankehitriny dia tsy maintsy manome tapa-kazo be dia be izy io.
Hafahafa aho amin'ny resaka tsiro, ekeko izany, saingy tsy maintsy milaza aho fa tiako ny iOS 7, namonjy ilay sary masina mahatsiravina.
Tsia, raha tsy hafahafa ianao, ny fanandramana fanandramana dia tena manokana ary mieritreritra aho fa tonga lafatra ny tianao ny iOS 7. Ny olana amin'ny iOS 7 dia tsy resaka tsiro izany, izany hoe, raha tianao izany ary ny hafa tsy tianao. Ny olana dia ny iOS 7 dia ny manimba izay Apple hatrizay, orinasa iray izay nivarotra ambonin'ny famolavolana rehetra, ny famolavolana nakarina amin'ny ambaratonga avo indrindra. Miaraka amin'ny iOS 7 dia nopotehina ity fotokevitry ny Apple ity, izany hoe i Apple amin'izao fotoana izao dia tsy aloky ny inona akory satria nivadika tamin'ilay tiany holazaina hatrany.
javitooo dia hoy izy:
Miombon-kevitra aminao 100% aho, rehefa nanavao ny Ipod aho dia hitako ny endrik'ilay programa ary diso fanantenana be aho
Mamaly an'i javitooo
Moa ve fantatsika ny fampiharana iray izay manara-maso ny vidin'ny bateria arakaraka ny fizotrany / fampiharana?
Tsy mampiasa azy ireo aho, tsy misy hevitra ...